Kulan Wacyigalin Ah Oo Lagaga Hortagayo Xaalufinta Dhirta Ayaa Dhacay Xarshin. - Cakaara News
Kulan Wacyigalin Ah Oo Lagaga Hortagayo Xaalufinta Dhirta Ayaa Dhacay Xarshin.
Xarshin,(cakaaranews), Sabti, 1dii October, 2016. Wakaalada ilaalinta deegaanka Kaymaha, horumarinta macdanta iyo tamarta DDSI oo ka duulaysa taaba galinta qorshayaasha u dajisan xukuumada DDSI ee lagaga hortagayo nabaad guurka iyo xaalu finta dhirta islamarkaana lagu hirgalinta qorshaha cagaarinta deegaanka ayaa waxay wakaaladu dadaal xoogan ugu jirtaa ka midho dhalinta qorshayaashaasi.
Haddaba, wakaalada oo kaashanaysa maamulka degmada xarshin ayaa kulan balaadhan ku qabatay hoolka shirarka ee magaalada xarshin ee gobolka faafan. Waxaana kulankaasi hogaaminayay maareeye ku xigeenka wakaalada ilaalinta deegaanka mudane Cabdirisaaq Dayib Xasan iyo gudoomiyaha degmada xarshin mudane Siciid Cabdiraxmaan Jaamac. Waxaana ka soo qaygalan kulankan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada xarshin iyo 19ka santar/tuulo ee hoos yimaada maamulka degmada xarshin.
Waxaana ugu horayntii ka hadlay kulankan wacyigalinta ah, maareeye ku xigeenka wakaalada ilaalinta deegaanka DDSI mudane Cabdirisaaq Dayib Xasan wuxuuna ka warbixiyay jihooyinka iyo istaraatajiyadaha u dajisan xukuumada DDSI ee ku wajahan ilaalinta deegaanka iyo awaamiirta adag ee ay xukuumada DDSI ka soo saartay ka hortaga xaalufinta dhirta deegaanka. Wuxuuna u sheegay bulshada maareeye ku xigeenku in kulankii ugu danbeeyay ee ay yeesheen hogaaminta xukuumada DDSI heerarkeeda kala duwan ee uu hogaaminayay Madaxwaynaha DDSI mudne Cabdi Maxamuud Cumar lagu kala qaatay go’aano lagu xakamaynayo xaalufinta dhirta islamarkaana lagu xoojinta hirgalinta qorshaha cagaarinta deegaanka. Wuxuuna ku booriyay qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka qayb-qaataan qorshahan lagu xakamaynayo xaalufinta dhirta qofkastana uu xil ka saaran yahay sidii uu u beerilahaa/abuurilahaa dhirta una xanaanayn lahaa dhirta si loo hirgaliyo qorshaha cagaarinta deegaanka.
Dhankiisa gudoomiyaha maamulka degmada xarshin mudane Ciciid Cabdiraxmaan Jaamac ayaa ka sharax dheer ka bixiyay ahmiyada ay leedahay ilaalinta deegaanku. Wuxuuna sheegay qorshayaasha lagu xakamaynayo xaalufinta dhirta ee u dajisan guud ahaanba deegaanka gaar ahaana maamulka degmada xarshin.
Dhankooda qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada xarshin iyo guud ahaanba santarada/ tuulooyinka hoos yimaada degmad xarshin ayaa sheegay in ay kaalin miisaan culus ka qaadanayaan hirgalinta qorshaha lagu xakamaynayo xaafulinta dhirta. waxayna qaybaha kala duwan ee bulshadu hoosta ka xariiqeen in hirgalinayaan qorshaha cagaarinta deegaanka.
gabagabadii kulankaasi waxaa laysla qaatay in si adag looga hortaga dhir jarinta ama dhuxulaysiga qofkii isaga oo geed jaranaya la arkana la horkeeno sharciga, taasi oo qaybaha kala duwan ee bulshadu ku muujiyeen go'aankaasi codbuuxa oo gacan taag ah.